Wasiir Samsam Taariikhdeedii Nololeed Iyo Qaybtii Labaad Oo Maanta Ku Saabsan Arimo La Yaab Leh.. Gudaha ka Eeg
Wasiir Samsam Taariikhdeedii Nololeed Iyo Qaybtii Labaad Oo Maanta Ku Saabsan Arimo La Yaab Leh.. Gudaha ka Eeg 0 Friday 7th October 2016 15:50:13 in Wararkii Maanta by Xarunta Dhexe Visits: 961
Wasiir Samsam Taariikhdeedii Nololeed Iyo Qaybtii Labaad Oo Maanta Ku Saabsan Arimo La Yaab Leh.. Gudaha ka Eeg Hargaysa (KNN) Iyadoo ay inoo maraysay in wasiir samsam cabdi aadan ay habar yarteed alle ha u naxariistee ay geyn jirtay deegaanka degmada qorilugud wakhtiyada kulaylaha ah ee dalka jabuuti looga xagaa baxo dhulalka qabow. Hase yeeshe wasiir samsam hooyo la’aan ayaa asiibtay korsiimada nolosheeda in kastoo door laxaad leh ay ka ciyaartay habar yarteedii soo korsatay ee dhanka wasiir samsam hooyadeed ay ka walaao ahaayeen,balse si kasta ama qof kasta oo koriya qof aanu dhalin waxaa hadana ka maqan qaybtii muhiimka ahayd ee hooyanimada . Dabeecadda wasiir samsam ayaa ah mid aad u qalafsan waxaana ay caloosha ku qabataa qof kasta oo ay maalin is jiidhaan ama is qabtaan,waxaana ugu wacan oo la sheegaa in wasiir samsam ay cuqdadawdo mararka ay xasuusato korsiimada nolosheeda maadaama ay ku dhacday hooyo la’aan hooyaduna ay tahay qofka ugu mudan nolosha aadanaha.
Dhinaca kalena beesha wasiir samsam ay ka soo jeedo ayaan waxba ku lahayn kafaalo qaadashadii wasiir samsam iyo hooyo la’aantii asiibtay yaraanteedii, waxaana ay si wayn uga soo hor jeedi jirtay wakhiyadii ay soo gaadhay da’da 20 labaatan jirta oo loo sheegay in beesheedu waxba ku darsan qaybta nolosha iyo waxbarashada wasiir samsam.
May aqoon wasiir samsam qorista af-soomaaliga waxaana ay qori jirtay afka faransiiska maadaama ay dalka jabuuti wax ku soo baratay balse wakhtiyadii dambe ee magaalada hargaysa ay soo degtay wasiir samsam ayay gurigooda ku dhigan jirtay qorista afka soomaaliga oo aad ugu adkaa halka uu maalin kasta bari jiray macalin bare ah oo ku bara gurigooda af-soomaaliga wasiir samsam.
La Soco Qaybta 3aad oo ku saabsan guurkii iyo aas aaskii lamaanaha wasiir samsam….. Karin News
Meel kasta wakhti kasta goor kasta iyo war kasta kala soco 24 saacadoodba .